Itoobiya oo xalineysa khilaafka Jubaland iyo DF | Warkii.com
Home warkii Itoobiya oo xalineysa khilaafka Jubaland iyo DF
Ilo wareedyo muhiim ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Warkii.com u sheegay in dowladda Itoobiya ay billowday qorshe ay ku heshiisiineyso dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland.
Wararka ay heshay Caasimada Onlie sheegayaa in mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ay gaareen magaalada Adis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, islamarkaana ay kawada hadleen aerimaha gobalka Gedo iyo doorashada Soomaaliya.
“Addis Ababa ayaa lagu kulmay waxaana garwadeen ka ah Abiy Axmed oo qaabilay labada dhinac waxa uuna ka dalbay in Itoobiya ay xaliso aerinta gobalka Gedo labada dhinacana ay wakiishaan, Jubbaland waa diiday waxay adkeysatay in ciidankaas oo aan laga saarin Gedo heshiis geli karin haddii ay dhici weysana dagaal dhici doono,” ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan baarlamanka Soomaaliya oo la hadlay Warkii.com.
“Hadda ma jirto wax la isku fahmay balse waxaa la qabaa rajo wanaagsan sababtoo waa qasab wada-hadal doorashada ka hor ah maxaa yeelay labada dhinacba waxay diyaarsadeen ciidan awood leh dagaal ayaana dhici kara,” ayuu yiri Xildhibaankan ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ee la hadlay Warkii.com.
Jubaland ayaa kalsooni ku qabin Itoobiya maadaama hadda ka hor ay weerareen Sheekh Mukhtaar Roobow Cali AbuuMansuur, sidoo kalane la sheegay in ay isku dayeen qabashada Axmed Madoobe waana sababta uusan ilaa hadda u aadin dalka Itoobiya kagana cudur daartay casuumado uga yimid Ra’iisul Wasaaraha wadankaas Abiy Axmed.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Canada oo ka jawaabay xoriyadda hadalka ee loo adeegsado in loogu gefo
Next articleMohamed bin Salman oo laga cabsi qabo in la dilo
Hoggaanka hey’adda culumada Soomaaliyeed ayaa war-saxaafdeed ka soo saaray ismaan dhaafka siyaasadeed ee dalka ka jira, kaas oo salka ku haya hanaanka loo fulinayo...